UBoity usengene esikhundleni sikaMinnie ohlelweni lwezemidlalo | isiZulu
UBoity usengene esikhundleni sikaMinnie ohlelweni lwezemidlalo
UBoity uzongena esikhaleni sikaNonhle kwelomculo
Angibangisani namuntu - Boity
Ubasanganise amakhanda uBoity!
Johanneburg - Ubuhle nenjabulo yikhona ebekuhamba phambili emcimbini wangoLwesine ebusuku ngesikhathi kumenyezelwa igama likaBoity Thulo njengomethuli omusha kanye nesazi sezinkundla zokuxhumana ohlelweni iNedbank Ke Yona, kubika iTimeslive.
UBoity ukhethwe ngemuva kohlelo lokuthungatha umethuli omusha ozothatha izintambo kuMinnie Dlamini osesebenze ngaphansi kwalesi siskhundla amasizini amane.
Le ntokazi yakwaThulo isanda kuthatha umsebenzi wokwethula uhlelo olusha lwezimoto olwaziwa njengeChange Down, ithi kuyayijabulisa ukuthola amathuba amahle njengalawa.
“Sesiwuqalile umsebenzi we-Change Down futhi kumnandi ngendlela emangalisayo. Ngicabanga ukuthi abantu ababoni ukuthi izinhlelo ezifana nalezi yizona ezishintsha impilo futhi nami ngafuna ukuba khona uma kushintshwa impilo yabantu abasha ibe ngcono kakhulu,” kusho yena.
Le ntokazi itshele abe-TshizaLive ukuthi ngeke iliyeke ithuba elihle lokuba ifunde futhi ithuthukise ulwazi enalo.
OLUNYE UDABA:OkaDlamini usejoyine iSupersport
UBoity uthi ufuna ukugxila ekuqiniseni ulwazi analo kwezokungcebeleka kanye nempilo kunokuthi agxile kwezemidlalo uqobo ngoba lokho kudinga umuntu oyingcweti kulo mkhakha.
“Ngiyacabanga ukuthi bakhethe mina ngoba bebone indlela engiziphatha ngayo ezinkundleni zezokuxhumana futhi yilokho engizoqinisa kukhona; ukufundisa abantu ukuziphatha emphakathini nezindlela zokwenza izinkundla zokuxhumana zikusebenzele,” ksuho yena.
Hhayibo, besenizwile ukuthi uZodwa Wabantu uhambe waze wayofika qathatha eWhite House, ngabe umubonile na uDonald Trump?
Usekolunye futhi ubishi uNico Matlala
Usobishini futhi usomabhizinisi ohlezi esematheni ngezindaba ezingezinhle, uNico Matlala.
Basazophela ukudliwa abakhiqizi nabadidiyeli bomculo oshisa izikhotha kulezi zinsuku igqom uma bengafuni ukuvula amehlo nezindlebe njengoba lo mculo usuphenduke intandokazi nakwamanye amazwe omhlaba.
Midrand - 12:02:09 PM CRASH at Samrand Road - QUEUING TRAFFIC Ezinye zasemigwaqeni